I-Leica C-Lux, i-compact super zoom entsha enedizayini enhle ne-1-inch sensor | Izindaba zamagajethi
Kuyiqiniso ukuthi imakethe yamakhamera ahlangene ishaywe kanzima ngama-smartphone. Kuyiqiniso ukuthi bathatha isikhala esincane ephaketheni lethu, ubhaka noma esikhwameni. Kodwa-ke, kufanele uphathe ezimbili amagajethi ngenhla kuyinto okungeyona wonke umuntu ozimisele. Umphumela? Ngithatha i- "all in one" ne-voila; okungukuthi: iselula ehlakaniphile.
Lokho kusho, kunezinkampani eziqhubeka nokubheja kumamodeli ahlangene kepha ezinikeza lokho ngaphezu kweselula lokho kakhulu premium noma yini, angikwazi ukunikela. Okokugcina ukufika ngu ULeica C-Lux, ikhamera enomklamo omuhle - njengakho konke okunikezwa nguLeica - kanye nezimfanelo ezinhle zokuba ngumlingani wakho othembekile nomaphi lapho uya khona.
Ungayithola iLeica C-Lux ngemibala emibili ehlukene: igolide noma okuluhlaza okwesibhakabhaka. Okwamanje, futhi njengoba sishilo, inomklamo ohlangene, yize lokhu akusho ukuthi unikeza imiphumela emihle. Ukuze uqalise, inzwa yayo ingu-1 intshi; ngamanye amagama, ucezu lwekhekhe luzophikiswa ngamamodeli ancintisanayo anjengeSony noma iPanasonic. Futhi, i- Isixazululo esiphezulu lapho ungathatha khona izithombe ngama-megapixels angama-20.
Futhi, le Leica C-Lux ifaka ukusondeza okufika izikhathi eziyi-15; izinhlinzeko ezakhelwe ngaphakathi; isikrini sayo sangemuva sinamasentimitha ama-3 nokuthinta okuningi; ngaphezu kokunikela nge- Isitholi sokubuka se-LCD esinamachashazi afinyelela kwezigidi eziyi-2,3 wokuxazululwa. Yini enye esingayisho ngayo? Yebo, engxenyeni yokuxhuma sizoba ne-Bluetooth ne-WiFi, into ngokuthandwa komakhalekhukhwini futhi amaphilisi kucishe kube ukuhlanganiswa okuyisibopho.
Ngokuqondene nengxenye yevidiyo yale Leica C-Lux, uma inkampani ifuna imodeli yayo ibe nethuba, ibingasinaki isixazululo esithandwa kakhulu okwamanje: impela, lokhu kungahle kube neziqeshana ze-4k. Ekugcineni, ngikutshele ukuthi intengo yayo ngeke ishibhile: izothengiswa ngoJulayi olandelayo bese ishaya izitolo ngentengo ye- Amadola ka-1.050.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Isithombe nomsindo » Isithombe » I-Leica C-Lux, i-compact super zoom entsha enedizayini enhle ne-1-inch sensor
IGreen Note 9 izongena emakethe ngo-512 GB wesitoreji
Wina okukodwa kwe-Rowenta Smart Force Essentials esikudidiyelayo kuleli sonto!